Soo dejisan AVG 2015 build 5577 Free... – Windows – Vessoft
CCN – antivirus awood leh si ay u ilaaliyaan aad computer ka dhanka ah spyware iyo software halis ah. software The baaritaanku nidaamka hab lagama maarmaanka ah, ogaadaa khatarta viral iyo iyaga tiraa. CCN siisaa difaac ka dhanka ah links waxyeello ku shabakadaha bulshada iyo websites kala duwan. CCN waa awoodaa in la ogaado dalabyada u halista ah ee fariimaha email ah. software The kuu ogolaanayaa inaad si sir iyo kaydka xogta sir ah oo macneheedu yahay sirta. CCN sidoo kale u saamaxaaya in ay sameeyaan liiska hawlaha baadhitaanka nidaamka on jadwalka.
Ilaalinta fayrusyada, spyware iyo rootkits
scan Selective oo waxaa ka buuxda
Daaweynta oo ka mid ah walxaha cudurka
Ogaanshaha of links halista ah ee internet-ka
العربية, English, Français, Español... Microsoft Security Essentials 4.9.218
English, Українська, Français, Español... SUPERAntiSpyware 6.0.1224 Free Edition iyo Professional
العربية, English, Українська, Français... Stellarium 0.13.3
English, Українська, Français, Español... MP4 Player 3.16.14